DAAWO:- Askar Jabuutiyaan iyo Somali wada socda oo xasuuq arxan darro ah ka geystay Gobolka Canfarta Itoobiya | Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Ugu yaraan 17 qof ayaa lagu dilay halka 34 kale lagu dhaawacay kaddib markii Ciidamo wata Dharka Ciidanka Difaaca Jabuuti iyo Booliska Ismaamulka Soomaalida ay weerareen dad Cafar ah oo ku sugnaa degaanka Afambo ee Gobolka Cafarta.
Dadka dhintay waxaa ka mid ah Haween,Caruur iyo Dad da’ ah,waxaana dadka degaanka ay sheegeen in Ciidamada isku dhafka ahaa ee weerarka geystay ay adeegsadeen Hoobiyayaal, Bambooyin iyo qoryaha daran dooriga u dhaca.
Xuseen Cali oo Guddoomiye degmo ka ah Gobolka Cafarta ayaa VOA-da qeybteeda afka Axmaarada u sheegay in dadka la dilay ay ku jiraan Afar Haween ah iyo cunugyar oo 6 bilood kaliya jiray.
Dhacdadan ayaa la xiriirta dhacdo hore oo lagu dilay 14 qof oo Soomaali ah kuwaas oo ay dileen Ciidamada Ismaamulka Cafarta,waxaana sidoo kale lagu eedeeyay Cafarta in ay dhulboob ka wadaan Gobolka Siti ee Soomaalida.
Previous articleDAAWO VIDEO:Madaxweyne Axmed Madoobe Qudbad Calaacal Jeediyey “Qudbad Hore Looga Baran”
Next articleTrump”ma waxaa jira Dad Ay runtii la tahay inaan dagaal la galno Turkey oo xubin ka ah NATO?”
Mgeljire October 16, 2019 At 1:04 am
Hoyaadaa uskaga kawas wad iska Hadleysaa waxannad hubin ha isaga waramin fucking yahaw .